I-Apple ibambe amalungelo okuvela kude kwi-Apple TV + | Ndisuka mac
UApple uthimba amalungelo okuza kude kwiApple TV +
Uninzi lweemovie kunye noluhlu olufikelela kuzo zombini i-Apple TV + kunye nezinye iinkonzo zevidiyo ezitshalazayo zivela kulungelelwaniso lwencwadi kunye / okanye umbono wababhali besikrini. Isivumelwano samva nje esifikelelwe yiApple ukwenza umxholo wokuqala unokufumaneka kupapasho Umhla wokugqibela.
Ngokwesi sixhobo, iApple ifumene amalungelo kulungelelwaniso lwefilimu yomculo weBroadway Yiza uQhele. Lo mdlalo, othi uphumelele ibhaso likaTony (I-Theatre Oscars), ikhokelwa nguChristopher Ashley kwaye ubalisa ibali eliyinyani lamawaka abakhweli abanjelwe kwidolophu encinci yaseNewfoundland.
UAshley ufumene iTony Award kulwalathiso lomculo Yiza kude. Kwakhona Utyunjwe kobugcisa obungcono. Umdlalo ubhalwe ngabaphumelele amabhaso ka-Tony Olivier u-Irene Sankoff no-David Hein.
UJennifer Todd kunye noBill Condon bavelisa ecaleni kwe- abavelisi bokuqala bomsebenzi, UJunkyard Inja yeeMveliso, kunye noMark Gordon. UBrittany Hapner uza kusebenza njengomdibanisi-mveliso. U-Laurel Thomson uza kusebenza njengoMvelisi oLawulayo we-eOne.
Iqela leMveliso yeAlchemy liza kujongana nalo Ukuveliswa kweqonga kunye nolwalathiso ngokubanzi. I-RadicalMedia (Hamilton, kaDavid Byrne waseMelika waseUtopia) uya kuphatha ukurekhodwa
Ukuveliswa kwale movie intsha izakuqala ngoMeyi kwisiXeko saseNew York Kwaye iya kuba nabasebenzi abangaphezulu kwama-200. Lo mboniso bhanya-bhanya uya kuba nenxaxheba kwimidlalo yokudlalwa kweBroadway, nangona iya kuyandisa i-cast yayo ukuze iqhubeke nokulungiswa. Inkulumbuso ye Yiza uQhele icwangciselwe kamva kulo nyaka kwi-Apple TV +.
Yiza uQhele yayikwibhodi yezaziso kumazwe amaninzi xa kwafika ubhubhane we-coronavirus, ke ukuba ubuceba ukuya kwindawo yemidlalo yeqonga ngelo xesha, ungalinda ukuze ubone iziphumo kwi-Apple TV + xa iqala ukubonwa. Le yimveliso yokuqala ye-Broadway eza kuphela kwi-Apple TV + kwaye ngekhe ibe yeyokugqibela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UApple uthimba amalungelo okuza kude kwiApple TV +
Gcina i-euro ezingama-100 ekuthengeni iMac yakho yama-intshi ezingama-27 intshi
Umsebenzisi uthumela i-AirTag ngeposi ukuze abone ukuba bangalandelela na uhambo